Raw Synephrine powder (97-07-5) Vaiti - Phcoker Chemical
SKU: 97-07-5 Category: Kuonda
Raw Synephrine powder ikemikari inowanzoitika iyo yakatsvakwa nevatambi uye avo vanotarisa kushaya uremu pamusana pemigumisiro yemuviri wekugadzira simba. Kunyange zvakadaro, chikamu ichi chinogonawo kuita se antioxidant uye anti-inflammatory agent uye inogona kuva nezvimwe zvehutano hunokosha.
Raw Synephrine powder ibine biogenic amine. Inowanikwa munzvimbo dzakakwirira mumapelisi emiti yemicrorus, sezvinovava machena kana Seville orange (Citrus aurantium). Zvinyorwa zvezvibereko kana peels zvezvirimwa izvi zvakashandiswa mumutauro wekuChina wekare kuti ugadzirise matambudziko emudumbu uye mishonga yemakore kwemakore.
Raw Synephrine powder (97-07-5) Tsanangudzo
Product Name Raw Synephrine powder
Kemikari Name Synephrine; Oxedrine; P-Synephrin ;; Parasympatol; Sympaethamine
Molecular Wsere 167.208 g / mol
Kunyorera Point 162 kusvika 164 ° C
Boiling Point 295.79 ° C (yakawandisa kuongororwa)
Synephrine, iyo inonziwo, p-synephrine, inowanzoita alkaloid. Chinyorwa chikuru cheAdrenergic agonist ip-synephrine, uye yakanyorwa mu pharmacopoeia inobva kuNorthern Europe uye kuGermany. Inowanikwa mumishonga inogamuchirwa yemishonga se neo-synephrine, m-an-substituted analog. p-synephrine uye m-synephrine vanozivikanwa nokuda kwenguva refu vachiita adrenergic zvinokonzerwa ne norepinephrine. Inogona kushandiswa mumakiriniki ekurapa kwechirwere chinonzi bronchial asthma, hypotension, kuparara, kushorwa, uye orthostatic hypotension; kunatsiridza metabolism; uye mukurapa kwezvinetso zvekudya zvinosanganisira indigestion, kuzvimba kwechiropa, phlegm, uye ptosis.
Mune dzimwe nyika, poda yakasvibirira synephrine yakatsvakwa nevatambi uye avo vanotarisa kuti varashike uremu pamusana pemigumisiro yemasimba emuviri. Synephrine inoshandiswa pakurapa kuneta nekuwedzera koriori kushandiswa uye mafuta ekusikisa mafuta, pamwe nekudzikisa kuderedza kufungidzika kunokonzerwa nekudisa. Kunyange zvakadaro, chikamu ichi chinogonawo kuita se antioxidant uye anti-inflammatory agent uye inogona kuva nezvimwe zvehutano hunokosha.
Raw Synephrine powder ibine biogenic. Inowanikwa pamakwikwi akawandisa mumapelisi emiti yemicrorus, sezvinovava machena kana Seville orange (Citrus aurantium). Zvinyorwa zvezvibereko kana peels zvezvirimwa izvi zvakashandiswa mumutauro wekuChina wekare kuti ugadzirise matambudziko emudumbu uye mishonga yemakore kwemakore. Parizvino, p-synephrin inoshandiswa zvakanyanya mumishonga, chikafu, chinwa, uye mamwe makhizha.
Synephrine powder (97-07-5) Mechanism of Action
Mwoyo yemigumisiro ye lig ligisi inobatanidza ne adrenergic receptor kusunga. Muzhinji, kana ligands inonamatira kune-a-adrenergic receptors, vasoconstriction inoitika, uye kana kusungirirwa kune β1-adrenergic receptors, moyo yevasimba chikwata uye kuwedzerwa kwemhepo yemutengo. Zvidzidzo zvinoratidza kuti chironga che synephrine chinosunga ku β3-adrenergic receptors, zvichiita kuti kuwedzerwa mumuviri kukwanisa kuputsa mafuta. Kusungira β3-adrenergic receptors hakuiti kukanganisa kwemwoyo kana kuwedzerwa kweropa. Zvakare, nokuti synephrine inoratidza zvishomanana kana kusina kusungirirwa kune α1-, α2-, β1-, uye β2-adrenergic receptors uye haifaniri kunge yakashandisa zvisina kunaka adrenergic zvinokonzera, mitsara yemwoyo, zvakadai sokuwedzera kwepfungwa yemwoyo uye kuwedzera kweropa, haisi anowanikwa pane zvinowanzoshandiswa, asingatauri dzimwe nhamba dze phenylethylamine uye zvinyorwa zve phenylpropanolamine. Zvidhinho zviduku zvinokonzera kukanganisa kukuru mu adrenergic receptor kusunga uye zvichizogona kukwanisa kubudisa mitsemangara yemwoyo.
Synephrine inowedzerawo kushandiswa kwemuviri kwemakhahydrates kuburikidza nekuwedzera simba rakafanana neAATP.49-52 Inobatsira kushandiswa kwemasero kweglucose mumasero emasumbu, uye glycogenolysis, gluconeogenesis, glycolysis, uye oxygen uptake. Kusabatanidzwa kwei-calcium ion uye musangano ne adrenergic receptors kwakaratidzwa kuti inobatanidzwa mune izvi zvinokanganisa zvipenyu, zvichiratidza kusabatanidzwa kwezvikonzero zvakawanda.
Kunze kwekuti, kushandiswa kweSynephrine powder kuchadzivisa kushandiswa kweNF-kB. Ichi chinhu chinokosha pakukonzera zvirwere zvinopisa sezvakaita asthma. Kushandiswa kweSynephrine kwave kuwanikwa kunoshandisa chiito che eotaxin-1 hormone zvikuru. Izvi zvinodzivirira kufamba kwe eosinophil kunzvimbo inopisa.
Kunyange zvazvo isina kujekeswa zvakajeka kuburikidza nekuedza, kushandiswa kweSynephrine powder kwawanikwa kuvhara chiito cheacetylcholineterase. Ichi chemikemikari inozivikanwa kukonzera chirwere cheAlzheimer.
Kushandisa kweSynephrine powder (97-07-5)
▪ Kuvandudza kushanda muviri
▪ Kurapa Chirwere cheshuga
▪ Kubatsira kurerutsa kurasikirwa
▪ Kuderedza kutya pamberi pokuvhiyiwa
▪ Kurapa zvipembenene zveganda zvakasviba zvakadai semakumbo, rutsoka rutsoka, uye jock itch.
▪ Kuvandudza Maitiro uye Masimba Enhanho
Yakakurudzirwa Synephrine powder (97-07-5) Dosage
Nhamba yakakwana yeSynephrin powder ndeye 50-100mg zuva rega rega uye 30-40 maminitsi musati maita basa. Uye, zvakanakisisa kutorwa chinhu chekutanga mangwanani kana 15 - 30 maminiti musati maitiro. Synephrine powder inofanira kutorwa nemvura isati yaitwa.
Kubatsira kweSynephrine powder (97-07-5)
♦ Kuongorora (DB-RCT) yevarume ve12 yakaratidza kuti sarfine synephrine inotorwa 45 maminitsi mushure mekuita maitiro kunowedzera huwandu hwekudzokorora uye huwandu hwekutakura mutoro paunenge uchitakura zvikwata zvichienzaniswa ne placebo.
♦ Kutsvakurudza kwepakutanga kunoratidza kuti kunwa tiyi yakagadzirwa kubva kumashizha eIndia snakeroot uye chibereko chemuorivhi wakaoma kwemwedzi ye4 inoratidzika kuderedza huwandu hwehuga hwevanhu kune vane chirwere cheshuga.
♦ Kusanganiswa kwechirephrine, caffeine, uye wechechi yaSt. John kunogona kubatsira kuderedza uremu paunoshandiswa nekachero yekoriki kudya uye maitiro.
♦ Kuongorora (DB-RCT) ye10 nyaya dzakapiwa 50 mg ye synephrine zvakaratidza kuti nyaya idzi dzakapisa 65 makorikiti kupfuura vatori vechikamu vakapiwa nzvimbo iyo mukutanga kwemaminitsi 75 mushure mokutora kuwedzera.
♦ Kutsvakurudza kunoratidza kuti kutora machero machena maawa maviri vasati vambovhiyiwa kunoderedza kutya.
♦ Mafuta anonzi Orange, ane synephrine kuwedzera kune zvimwe zvinoshandiswa zvinoshandiswa, mune imwe tsvakurudzo yevarwere ve60, yakagadziriswa fungal yechipfuva zvirwere zve ((tsoka, muviri / ganda, kana kugomera) mu2 kusvika kumavhiki e3 kupfuura 80% yevatori vechikamu.
♦ Mice pamwe nezviratidzo zvekutambudzika, kusanganisira matambudziko ekurara uye kuchinja mukudya, zvinoita zvakanyanya pakupindura zviitiko zvinotambudza, sekumanikidzwa kushambira, kupfuura mishonga ine utano. Chimwe chidzidzo chakaratidza kuti mutswa yakadyarwa synephrine powderwere inokwanisa kushambira kwenguva refu, zvichiratidza simba rakakwirira uye mazwi ehupenyu
♦ Chimwe chekuongorora ma laboratori chakaratidza kuti chirwere che synephrine chakadzivirira kukura kwemamwe mabhakitiriya kusanganisira E. coli, izvo zvinogona kukonzera chepfu yezvokudya, uyewo Staphylococcus aureus, izvo zvinogona kukonzera zvirwere zveganda.
♦ Kuongorora kwakaitwa kuburikidza nemakungu emakona kwakaratidza kuti synephrine yakaderedza marwadzo emusana unotapira mumutambo, chiratidzo chinosangana nekukanganiswa. Synephrine zvakare akadzikisa zviratidzo zvechirwere zvakaitika apo mhuka dzakapiwa histamines.
♦ Muzvipukanana nemapapu ekukuvadza, synephrine yakaderedza masero ezvokuvhiringidza uye magetsi ekuvhiringidza TNF-alpha neI-6, pavanowedzera i-anti-inflammatory IL-10.
Raw Nicotinamide Mononucleotide (NMN) yeupfu yakadzingwa nezera rinobatanidza kuwedzera kwemaviri ......